Ntụgharị uche na ọgwụ na 2021: otuto nlekọta?
Edere site Tranquillus | Jan 12, 2022 | Na weebụ
Dị ka ụmụ akwụkwọ ahụike, anyị zutere ntụgharị uche dị ka ụzọ nkwughachi, oge n'onwe ya, ume, ụzọ isi lekọta onwe anyị, iji lekọta ndị ọzọ nke ọma. Metụrụ ndụ, ọnwụ, mmadụ, impermanence, obi abụọ, egwu, ọdịda…Taa ụmụ nwanyị, ndị dọkịta, anyị enyefewo ya ụmụ akwụkwọ site na nkuzi.
N'ihi na ọgwụ na-agbanwe agbanwe, ụmụ akwụkwọ taa ga-abụ ndị dọkịta echi. N'ihi na ịzụlite echiche nke ilekọta onwe ya, ndị ọzọ na ụwa dị mkpa, ngalaba na-ajụ onwe ya ajụjụ.
Na MOOC a, ị ga-achọpụta ụzọ a site na nlekọta gaa na ntụgharị uche, ma ọ bụ site na ntụgharị uche gaa na nlekọta, dabere na ahụmịhe nke ụmụ akwụkwọ ahụike.
Ya mere, anyị ga-enyocha ihe omume mgbe emechara
Otu esi elekọta onwe gị iji lekọta ndị ọzọ n'oge a na-awakpo ahụike uche nke ndị nlekọta na usoro ụlọ ọgwụ na-ama jijiji?
Kedu ka esi esi na omenala nke bandeeji gaa na omenala nlekọta nke na-elekọta ihe ndị dị ndụ?
Kedu ka esi azụlite mmetụta nke nlekọta, karịsịa na nkà mmụta ọgwụ, n'otu n'otu na mkpokọta?
Ntụgharị uche na ọgwụ na 2021: otuto nlekọta? January 17th, 2022Tranquillus
GỤỌ Ịkwado onye ọrụ na ezumike ọrịa iji zere mgbasa nke ọkachamara ma kwadebe maka nlọghachi ha
gara agaMụta ikuziri Sayensị Dijitalụ na Kọmputa
-esonụJiri CCI nke ọma na ozi-e
Kedu asụsụ ndị a na-asụ na China? Ntụziaka anyị na asụsụ ndị China
Onye njikwa dị elu: Understandghọta isi atụmatụ ụlọ ọrụ
Akụ na ụba na mmekọrịta ọha na eze